BBC Somali - Warar - Ansixinta Golaha wasiirada oo dib loo dhigay
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 10 Novermber, 2012, 11:33 GMT 14:33 SGA
Golaha wasiirada ayaa ka kooban toban wasiir.
Baarlamanka federaalka Soomaaliya ayaa dib u dhigay qorshe lagu horgeeynayay xukuumadda cusub iyo barnaamijkeeda Siyaasadeed waqti aan la cayimin. Dib u dhigan ayaa yimid kadib markii ay soo baxeen doodo dastuuri ah oo ku saabsan inaan xukaamadda la hor geyn karin baarlamanka iyadoon la soo dhamaystirin magacyada wasiir ku xikeenada iyo wasiiru dawlayaasha ay yeelanayso dawladda cusub.
Waxaa jiray doodo ay qabeen xildhibaano ka tirsan Baarlamanka, oo ku aadanaa sida aysan raaliga uga ahayn in xukuumadda la hor keeno Baarlamaanka iyadoon la soo dhamaystiran.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow, oo kamid ah baarlamanka Cusub ayaa BBCda u sheegay inaanay sharci ahayn in xukuumad aan la soo dhamaystirin la hor geeyo Baarlamaan.
Ra'iisul Wasaaraha cusub Cabdi Faarax Shirdoon, ayaa looga fadhiyaa inuu si deg deg ah u guda galo dhamaystirka xukuumaddiisa. Xildhibaanada qaarkood ayaa doonaya inay ka mid ahaadaan xubnaha dhiman ee dowladda ee isugu jira wasiiru dawlayaasha iyo iyo wasiir ku xigeenada.
Ilaa hadda lama sheegin waqti rasmi ah oo la soo dhamaystirayo xukuumadda cusub iyo goor la horgeynayo Baarlamanka.